MIBVUNZO-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Kunyangwe iyo Iridium spark plugs iri garandi yeupenyu?
Takumi ndeimwe yekutanga spark plug vagadziri vanopa vatengi warandi yeupenyu hwese. Imwe iridium spark plug inoshanda nguva yakagadzirirwa kuti igare kusvika makiromita zviuru makumi masere uye iine maficha ekukurumidza kutanga, kumhanyisa mhanyisa, kupisa kwakazara uye kuchengetedza mafuta.
Ndezvipi zvakanakira Takumi iridium spark plug?
TAKUMI inonyanya kuita aotomobile spark plug, maindasitiri emoto plug recerch & budiriro makore makumi mashanu. Iridium spark plugs yeTAKUMI yakagamuchirwa zvakanyanya nevapfeki veMiddle East, East Asia neRussia. Tiri kutora vatengesi vakanaka kwazvo pasirese.
Ndeupi mhando yemhete yekupedzisira gap yandinofanira kumhanya?
Kana iwe uchida chaiyo gapiti kurudziro yekushandisa kwako, ndapota nyorera vedu vatengi nzvimbo kuti uwane rumwe ruzivo.
Ndine seti yemukwikwidzi piston, uye ini ndinongoda maviri mamwe. Unogona TAKUMI kugadzira t
Kwete. Hatizogadzire kutsiva mapistoni kuti aenzane nemamwe mabhureki pane akawanda asingasviki kuzere seti.
Ndine seti yemukwikwidzi's piston sets. TAKUMI inokwanisa kuitazve basa here?
Kwete. Hatingazoitezve reworking kune chero pisitoni kunze kwekupa kune vatengi veOE.
Iyo alternator ichakanganisa mashandiro?
Injini yemotokari painenge ichimhanya iyo alternator inogadzira magetsi ekumhanyisa mota nekushandisa zvinhu zvakaita redhiyo, mawindo emagetsi, zvigaro, madhoo, maipukuta, uye mapulagi ekubatidza mafuta kuita kuti mota iende. Magetsi akawandisa anodzosera bhatiri iro rinonyanya kushandiswa kutanga mota pakutanga. Pasina chinotsiva mota yako inongomhanya ichatiza bhatiri iyo inozopedzisira yodzikira pasi uye inopera nekukurumidza zvikuru uye inoda kutsiviwa. Sezvo bhatiri iri kufa kushanda kwayo kunoshatisa maitiro ako kusvikira yanyatsofa ipapo mota yako haizoendi.
Unoziva sei kana iyo alternator isiri kubhadharisa?
Tarisa voltage pabhatiri neinjini inomhanya. Inofanira kuverenga kubva ku13.5 volts kusvika ku16 volts. Kana ikaverenga yakaderera pane gumi nemashanu volts iyo alternator haina kukwana.